Home » Featured » axle ai waxay bilaabaysaa Ololaha maalgelinta SeedInvest
Boston ku saleysan axle ai waa mar labaad wararka. Shirkadda hormariska ah, oo sii wadata inay wax ka qabato baahida weyn ee aan loo baahnayn ee qalabyada raadinta iyo maareynta fiidiyowga ee kooxaha yar-yar iyo kuwa dhexe, ayaa shaaciyay toddobaad ka hor, bilawga ah ee axle ai GearTM, nidaam isku dhafan kaas oo isku-daraya awooda cusub ee Apple Mac-kumbuyuutar oo cusub iyadoo la adeegsanaayo axle ai's browser-ku-salaysan, maareynta warbaahinta AI-kartidiisa, shaqo-socodka iyo software-ka. axle ai Gear waxa uu isku daraa casriga ugu dambeeyay ee farsamada qorista iyo raadinta qalabka casriga ah iyo qalabka wax lagu beddelayo ee loogu talagalay fududeynta isticmaalka iyo helitaanka ballaaran.
Maanta, shirkaddu waxay ku dhawaaqday in ay bilaabayso maalgelin wareeg ah SeedInvest, oo ah hoggaan sare oo sinnaan ah. Mashruucan ayaa maanta ku nool www.seedinvest.com/axle.ai/seed. SeedInvest waxay bixisaa maalgaliyeyaal shakhsiyadeed oo leh fursad ay ku helaan fursado maalgashi ah oo horay loo sii qorsheeyey. SeedInvest ayaa maalgeliyey xawaaladaha 150 waxayna ku faantaa inay si degdeg ah u korodhsanayso maal-galiyeyaasha 200,000. SeedInvest ayaa ka soo kordhay shirkadaha 25,000 ee dalbanaya inay kor u qaadaan caasimadda tan iyo markii la aasaasay oo kaliya waxay aqbashay 1%% shirkadahaas inay ka muuqdaan mashiinka.
Natiijada marxaladda JOBS (Hawlaha Ganacsiga ee 'Jumpstart Our Business Start Act') ee 2012, maalgashadayaasha aan la aqoonsan iyo kuwa aan la aqoonsan karin waxay awoodaan inay maalgashadaan shirkadaha gaarka loo leeyahay. SeedInvest waxay suurtagal ka dhigeysaa suurtogalnimada suurtagalka ah ee shirkadan, kaas oo horey u ahaa koboc dhaqaale muddo wakhti ah ayaa soo dhaweynaya maalgashi dibadeed iyada oo loo marayo mashiinka.
axle ai waxay iibisay fiidiyoowyo farsameed ee fiidiyoow ah iyo maareynta software-kada ee shirkadaha 500 ee adduunka oo dhan, kana socda shirkadaha warbaahinta sida Turner, CBS iyo Paramount, shirkadaha caalamiga ah sida REI, Reebok, Coca-Cola iyo Price Waterhouse Coopers. Barnaamijka, Kalluumeysiga ugu dambeeyay ee sirta farsamada iyo barashada mashiinka, waxay u oggolaataa macaamiisha in ay tagaan, raadiyaan, maamulaan oo ay la shaqeeyaan warbaahintooda siyaabo horayba u khalkhal galin ama qiimo badan. Maaddaama muuqaalka fiidiyowga ku salaysan yahay sii wacyigelinta caalamiga ah sida dhexdhexaadinta isgaarsiinta lagama maarmaanka ah, axle ai's software'ka ayaa siiya fikrado abuuraya oo leh kharash-sahlan oo si sahlan loo isticmaali karo si loo caawiyo maamulidda habka loo abuurayo fiidiyowga.
Siciid Sam Bogoch, oo ah madaxa shirkadda axle ai, "axle ai ayaa si dhaqso ah u koraayay tan iyo markii aan aasaasay sababtoo ah aduunkoo dhan oo aduunka oo dhan sii wadaya ee xeeladaheena softwareka fudud ee sahaminta iyo maareynta muuqaalka fiidiyowga." Continued Bogoch, "Waxaan helnay SeedInvest lammaane maaliyadeed oo runtii ah, waana ku faraxsanahay inay soo dhaweyso maalgashadayaasha si ay qayb uga noqoto shirkaddayada sii kordheysa. "
Curtis Chan waa madaxweynaha iyo CEO / Founder iyo Maareynta Partner laba Suuq Brand technology sare iyo shirkadaha xiriirka dadweynaha, CHAN & Associates oo SAAMAYN garashada, kuwaas oo macaamiisha u dhaxayn Fortune Global 500 in ay ku fakaraan caasimada maal GOORMUU.
Hay'adaha uu 'adeegyada, muddo ka badan labaatan sano, ayaa ka caawiyay maqsinka yada iyo kobaca shirkadaha hore gaadhista brand weyn, taasoo keentay in labada helitaanka ama IPO, iyadoo qiimaynta guud ee ka badan $ 2.0 Billion.
Mr. Chan waa Maal ganacsadaha serial, deeqbixiye, qoraaga iyo malaa'ig. Waxa uu hore in lagu caawiyo si gayaysiin in labada teknoolajiyada digital video maqal iyo digital for duubo, warbaahinta iyo boostada warshadaha wax soo saarka door fulinta ee muhiimka ah. Isaga oo soo jeeda ballaaran u dhexeeysa ka badan saddex sanadood ah mar walba sii kordheysa doorka fulinta hawlgallada, horumarinta ganacsiga, injineeriyada iyo iibka / suuqgeynta ee technology macluumaadka, warbaahinta iyo madadaalada, kaydinta iyo isku xirka, iyo warshado kale ee la xiriira farsamada sare. Isagu waa mentor firfircoon iyo la taliye sare oo ka tirsan in ay shirkado badan oo la aasaasay oo ku bilaaban-up, oo ah falanqeeye suuqa / technology ah, oo uu leeyahay in ka badan labaatan sano oo waayo aragnimo ah ee horumarinta brand, turnarounds maamulka la talinta / shirkadda, advertising hal abuur iyo xiriirka dadweynaha.
Jaamacadda California University of Science, San Luis Obispo, Mr. Chan wuxuu u dabaaldegayaa sannadkiisii ​​12 ee xubin guddi ah oo ka tirsan machadka Fullerton College, 16th sannadkii oo ah Shirkadda Ganacsiga ee degaanka iyo Hagaha Machadka Ganacsiga yaryar ee Jaamacadda California State University Fullerton iyo kulliyadaha. Intaa waxaa dheer, waa xubin mutadawacnimo ah oo ka tirsan DECA (Delta Epsilon Chi iyo Naadiyada Waxbarashada ee Diyaarinta Mareykanka); oo ah lataliye ka tirsan Machadka Cilmi-baarista Caalamiga ah ee Qaab-dhismeedka Qashin-qaadka, lataliye, Cal Poly, San Luis Obispo iyo xubin ka tirsan Guddiga Cagaaran ee Green iyo Society. Dareenka ku saabsan daryeelka bukaan-jiifka, wuxuu ahaa Guddoomiyihii hore ee Guddiga Ururka Kalsoonida ee Xanuunka; oo ah afhayeenka joogtada ah ee munaasabada MBA iyo Doctorate heerar kala duwan oo dalka ku baahsan. Waxa uu soo bandhigay oo daabacay waraaqaha 30 ee adduunka oo idil, waa buug wadaag ah oo wadaag ah, xubin guddiga tifaftirka Bulshada Motion Picture iyo Telefishanka Telefishinka, Tifaftireeye sare ee War Beat Magazine, tifaftireeye kaqeybgalayaasha ah ee daabacaadyada ganacsi ee Maraykanka iyo caalamkaba ee ku saabsan wax ka badan sanado 30.
View adeegyada Impact Cognitive at www.cognitiveimpact.com. Curtis lagu tagi karaa at curtis@cognitiveimpact.com; Xafiiska: (714) 447-4993 ama curtis@broadcastbeat.com.
posts Latest by Curtis Chan (arki dhan)
Previous: Cinwaanka casriga ah ee loo yaqaan 'Red Digital Cinema' si loogu marti qaado sheeko la xiriirta sawiristo Sandra Valde-Hansen At 2018 Camerimage
Next: GARRETT BARNAAMIJ KA HELI KARAA KOOXAHA KOOWAAD EE KOOBKA JAPAN